Ndị na-eweta Luch nke Tibet: Ndị Tibet Terrier ha ziri ezi maka gị? - Reeddịrị
Ndị na-eweta Luch nke Tibet: Ndị Tibet Terrier ha ziri ezi maka gị?
A na-akpọkarị 'Nkịta Dị Nsọ nke Tibet,' a na-akpọkwa ndị Tibetan dị ebube Dhokhi Apso, ndị Tsang Apso, ma ọ bụ TT. Ha nwere oke nha anya, mana n'agbanyeghị aha ahụ, ha abụghị ezigbo ụjọ.
The Tibet Terrier nwere storied na kediegwu akụkọ ihe mere eme na-agbakwụnye na mmasị gburugburu ndị a dị ọcha pups.
Isi mmalite: Tibet Terrier
Anya nke ndị Tibet Terrier
Onye Timid Tibet Terrier
Nlekọta Ibe gị
Achọrọ ndị Tibet Terriers Ahụike
Ofgwọ nke Luck
Lhasa Apso vs. Ndị Tibet Terrier
Ngwakọta nke Tibet Terrier
Ndi Tibet Terrier bụ nkịta gị?
Readinggụ Ọgụgụ: Udiri anumanu
O nwere ike ọ gaghị abụ ihe ijuanya na mmalite nke Tibet Terrier na-amalite na Tibet.
Ndị mọnk Buddha nke mpaghara Himalayan a zụrụ ha dị ka ndị nche na ndị enyi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 2000 gara aga. Ndị agbụrụ Nomadic jikwa ụdị oge ochie a na-azụ atụrụ ha.
TTs bụ ezigbo ọmarịcha ọtụmọkpọ, nke mere ka aha ha nke nkịta dị nsọ dịkwuo ike, e nyere ha dị ka onyinye iji nyefee onye nata ya ihe ọma.
Ndị Tibet agaghị ere ma ọ bụ mebie nkịta ndị a n'ụzọ ọ bụla n'ihi na ha kwenyere na ọ ga-eweta chi ọjọọ.
Ndị Tibet Terriers na-ejidekwa ọdịiche nke eji ya na mmepe nke ọtụtụ ụdị. Dị ndị dị ka Shih Tzu, ndị Tibetan Spaniel, na Lhasa Apso ji ụgwọ na Tibet Terrier.
Ọ bụ ndị njem Europe bu ụzọ kpọọ ndị a chioma wetara Terriers n'ihi na ha chere na ọ nwere myiri.
Dr. Agnes Greig webatara ìgwè a na Europe na 1922. Onyinye Tibet abụọ nyere onyinye maka ọrụ ya na Women’s Medical Service nke India, ọ kpọbatara ha na England.
Na 1924, nkịta ndị ahụ, Bunti na Rajah, nwere akwụkwọ mbụ ha, edebara aha ha dịka Lhasa Terriers.
The Lhasa Terrier designation rapaara ruo 1930 mgbe Kennel Club nke India gbanwere ya na Tibet Terrier mgbe ha dere ụdịdị ọkọlọtọ.
Dr. Greig gara n'ihu na-arụ ọrụ na ụdị azụ ahụ na England, ebe o meghere Lamleh Kennel. Na 1937, ọ nwetara ụdị a site na English kennel Club.
Ndị mbụ Tibet Terriers chọtara ụzọ ha na United States na 1956, na serendipitously na-abịa site na Dr. Greig's Kennel.
Na Tibet Terrier Club nke America (TTCA) hiwere n'afọ na-esote. Na American Kennel Club (AKC) matara udiri a “otu ndi n’egwuregwu” n’afọ 1973.
AKC ugbu a ghotara TTCA dị ka Parent Club nke ndị Tibet Terrier.
N'oge a, ndị Tibet Terriers na-emeri obi dịka ọ meriri nkịta. Na 2016, onye mmeri na-abụghị egwuregwu nke National Dog Show bụ Tibet Terrier.
Ndị Tibet bụ ndị nkịta na-ajụ ajụ nwere uwe pụrụ iche. Ha nwere isi dị obere nke nwere ntakịrị mkpọda na ntị. Ntị ha dị ka ọdịdị V ma kwụpụ n'akụkụ isi.
Ha na-egosipụta anya sara mbara nke ga-abụ ndo na-acha nchara nchara, ọ ga-ekpukwasịkwa anya ahụ nke ọma site na ntutu na-egosipụta site n'egedege ihu ya.
Nkịta a na-amị obere ajị agba nwere obere ajị agba n'okpuru ya yana imi ojii dị mma n'ọnụ ya. Ha nwekwara nri pụrụ iche nke nwere ike ịbụ ọkwa, mkpa, ma ọ bụ tụgharịa azụ.
TTs nwere ụkwụ buru ibu, gbara gburugburu, dịkwa larịị nwere pad ndị gbara ọkpụrụkpụ na-emepụta mmetụta snowshoe.
Uniquekwụ ha pụrụ iche na ogologo, ụkwụ siri ike na-enye ohere maka nsụgharị na ịdị nkọ dị egwu, nke bịara dị mma na ala siri ike nke Tibet. Ha na-enwekwa ụkwụ aka nke toro ogologo karịa ụkwụ ụkwụ ha.
Ha nwere ahụ nwere ahịrị nwere ahịrị nwere ọkwa larịị gbadara ọdụ ha ogologo. Tadị ọdụ ha na-agbagọkwa azụ, ha nwedịrị ike ịgbanye n'otu akụkụ.
Kedu ka ndị Tibet Terrier si atụ?
Mediumdị a dị obere nwere ike ime nke ọma na ụlọ ma ọ bụ n'ụlọ ma ọ bụrụhaala na ha enweta mmega ahụ kwesịrị ekwesị. Tupu ị kpọta onye Tibet Terrier, ị nwere ike ịchọ ịmata etu ha ga-esi buru ibu.
Onye Tibet Terrier : Nwoke Nwanyi
Elu: 14-17 sentimita asatọ
Arọ: 18-30 pound Obere Nta
Ndị Tibet Terrier na-eto nwayọ nwayọ karịa ụfọdụ ụdị. O nwere ike iburu n’agbata ọnwa iri n’agbata ọnwa iri na ọ bụla ruo n’abalị iri tupu ha eruo ogo mmadụ.
Mkpọchi Luscious: The TT Coat
Ndị Tibet Terrier nwere mkpuchi abụọ pụrụ iche. Uwe mkpuchi ime ahụ dị n’okpuru, nke ajị anụ, na nke dị nro. Uwe elu ha nwere ogologo ntutu dị iche iche nwere ike kwụ ọtọ ma ọ bụ gbagọrọ agbagọ, ọ na-agbadata etiti etiti azụ ha.
Uwe ha ogologo na-abụkarị ihe a kacha mara amara n'ihi na ha nwere ntutu isi na-ekpuchi ahụ ha niile.
A Cornucopia nke agba
N'ihe banyere agba nke uwe ahụ, ndị Tibet Terriers enweghị ntụkwasị obi. Ha nwere ike ịbụ agba ọ bụla ma ọ bụ nchikota ọ bụla nke agba ndị ahụ.
Agba na ngwakọta mara mma
Nwa Bido Golden Brindle Silver
Nwa & White Brindle & White Agba ntụ Silver na Nwa
Nwa, White & Gold Agba aja aja Agba ntụ & White Silver na ọcha
Nwa & Brindle Agba aja aja & White Net Na-acha ọcha
Nwa & Nchara Gaa Uhie na White White na Nwa
Nwa & Gold Fawn & White Uhie uhie White na Ọlaedo
Black na White Brindle Ọlaedo Sabre
Black, Agba aja aja & White Gold & White Sable & White
Ebube Dị ebube
Na-agafe ụdị mpempe akwụkwọ na nke sili ekwuru, nkịta ndị a nwere ike igwu egwuregwu dị iche iche dị iche iche.
Ickedkpụrụ akara, isi ojii, nkpuchi ojii, na akara ojii ma ọ bụ na-acha ọcha nwere ike ịpụta onwe ha na ụdị.
Ndị a na-ahụ n'anya, ụmụ na-ahụ n'anya na-eme ezigbo ndị enyi na nkịta ọgwụgwọ. ’Ll ga-achọ ịhụ na ha na-eto eto nwere mmekọrịta ha na ụmụ mmadụ na anụmanụ ndị ọzọ.
Enweghi mkparịta ụka ndị a na nwata, ndị Tibet Terriers nwere ike nwee oke ihere. Ha bụkwa nkịta ezinụlọ mara mma nke na-eme nke ọma na ụmụaka, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha na-eme ihere gburugburu ha na mbụ.
Ndi TTs na-eme ihe ike?
Ndị Tibet abụghị ndị agbụrụ na-eme ihe ike, ha na ndị ọzọ na anụ ụlọ na-eme nke ọma, ọbụlagodi na ha nwere ike ịkwụsi ike.
Ha abụghịkwa ndị na-ere ahịa gabigara ókè, mana ha nwere ike ịhapụ ogbugbo miri emi iji mee ka ị mụrụ anya. Ha nwekwara ike inwe nchekasị nkewa, nke nwere ike ime ka ogbugbo ahụ dịkwuo njọ ma ọ bụrụ na ọ nọ naanị ya ruo ogologo oge.
Zụ TT nwere ike ịnwe ndidi n'ihi na nkịta ndị a nwere ọgụgụ isi nwere ike ịnwe usoro isi ike.
Ha nwere ike ime nke ọma site na nkwado dị mma, mana ọzụzụ nwere ike iwe ogologo oge n'ihi na ha tozuru nwayọ karịa ụdị ndị ọzọ.
Mfe nke trainability ha dabere na ihe dị iche iche, dịka usoro gị na afọ ha.
Ndị na-ebute Tibet nwere ike ịbụ nnukwu ụlọ mmezi, mana nke ahụ bụ isi n'ihi mkpa nlekọta ha.
Dịka mmalite ha si egosi, ha nwere ike ịba ọgaranya na ihu igwe oyi, mana ha nwekwara ike ime nke ọma na ihu igwe ọkụ. Jide n'aka na ị zere oke ọkụ ma ọ bụ oyi na ndò ma kpuchie nwa gị dị mkpa.
Na-emega Terrier Tibet Gị
TT gị ga-enwe ọkwa dị elu na ike dị elu nke chọrọ mmega ahụ kwa ụbọchị. Ha ga-enwe mmasị iso gị gaa ogologo ije, jog, ma ọ bụ ogige nkịta, ha agaghịkwa emegide ogige dị mma iji gbaa gburugburu.
N'ihi na ndị Tibet Terrier gị bụ nkịta nwere ọgụgụ isi, mmega ahụ ha gụnye gụnyere mkpali ọgụgụ isi.
Usoro ọzụzụ na-akwụghachi ụgwọ nke na-enye ha ohere ịnwe mmetụta na-enye aka ga-arụ ọrụ ebube maka ọkwa ọrụ ha ma n'uche ma n'ụzọ anụ ahụ.
Usoro ịgba alụkwaghịm kpụ ọkụ n'ọnụ
Roomlụ nwunye gị Tibet Terrier ga-ewe oge. Ha ga-achọchacha 2-3 ugboro n'izu, mana m na-atụ aro ịmịcha kwa ụbọchị.
Ga-achọ igirigi uwe ha na mmiri tupu ị na-ehicha, ị nwekwara ike ịgbakwunye ihe mkpuchi na alụlụ ahụ iji nyere aka mee ka uwe ha.
Ọ bụrụ na ịgbanyeghị uwe ha tupu ị na-ehichapụ, ntutu nwere ike ịgbaji na dọkatụrụ adọka, nke nwere ike ghara iru ala maka nwa gị.
Nkịta gị ga-enwe ntutu n’etiti mkpịsị ụkwụ ha na n’okpuru ntị ha. Ikwesiri idobe ebe ndị ahụ anya ma dị ọcha.
Inyocha ntị ha kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa maka gị ka ị chọghị ịmalite ihe ndị na-emerụ emerụ.
Kwesịrị ịhịrị gburugburu nkwonkwo ha iji mee ka ntutu dị na ebe ndị ahụ ghara ịta ma ọ bụ mebie.
Ndị na-ebute Tibet bụ hypoallergenic. Ha bụ ndị na-ebu obere ala nke na-emepụta obere anụ e ji eme ụlọ, nke bụ ihe na-emetụta ọtụtụ ndị na-arịa ọrịa ahụ.
Maka ị na-edebe uwe mkpuchi nke enyi gị, ana m akwado ịsa ahụ kwa izu.
Can nwere ike ịkwanye oge ahụ ihe dị ka ụbọchị iri ọ bụla, mana ọ na-enyere aka na ịsacha na ịdị ọcha iji mee ya ugboro ugboro.
Ekwadoro m ka ị kụọ mbọ ha kwa izu abụọ nwere mkpirisi dị elu. Elegharakwa ha anya. Ga-achọ ịsacha ezé ha oge niile iji mee ka ndị chompers ahụ nwee ahụ ike.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata otu esi etinye aka na otu n'ime nkịta ndị a, lelee nke a ejiji video .
Achọrọ nri TT
Nri TT gị nwere ike ịbụ ọrụ dị mfe. Ha nwere ike ịchọ ihe ruru iko 2 nri kwa ụbọchị, dabere na ogo ha na afọ.
Gbalia nye ha nri nkita di elu nwere ezigbo ihe eji enyere ha aka ikwalite oru ha.
Otu oke njiri mara nke ndị Tibet Terrier bụ na ha n'ozuzu ha anaghị eri oke nri. A maara ụdị ahụ ịhapụ nri na nnukwu efere ha mgbe ha risịrị ihe ha chọrọ.
Na ụdị ọ bụla, e nwere nri ị na-ekwesịghị inye ha. Mlọ Ọrụ Ahụike WebMD na-enye ọmarịcha ozi banyere nri na-egbu egbu .
M na-adụ ọdụ mgbe niile ị na-enyocha nri ma ọ bụrụ na ị maghị ma ị ga-ekwe ka obere enyi gị nwee ụfọdụ.
Ndị na-ebute Tibet nwere mkpa ahụike pụrụ iche. Ọtụtụ mgbe, ịgba mmiri ma ọ bụ ikwupụta mmiri nwere ike ịba uru na nwata, mana ụdị a nwere ike ịnwe nsogbu maka nsogbu nkwonkwo ma ọ bụrụ na nke a ga-eme.
A na-atụ aro ka ịgba mmiri ma ọ bụ ịgbanye mmiri na-ewere ọnọdụ ozugbo nkịta gị tozuru oke.
N'ihi akwa mkpuchi ha, TT nwere mmetụta fleas. Ga-achọ ijide n'aka na ị na-agbaso uwe ha na ọgwụ flea.
Ka nkịta gị na-etolite, ị ga-achọ inyocha maka nsogbu ahụike dịka ọrịa kansa, cataracts, na ntamu obi. Nkịta gị nwere ike inwe nsogbu ahụike ndị ọzọ metụtara ndụ ya niile.
Omume Ahụ Ike:
Geriatric Obi Mkpu
Ceroid Lipofuscinosis / Canine Neuronal Ceroid Lipofuscinosis
Hypothyroidism na-agwọ ọrịa
Nkume eriri afo
Anya / ntutu anya Nsogbu
3dị Atrophy nke Na-aga n'ihu Na-aga n'ihu 3 (PRA-Typ3)
Isi Lens Luxation / Lens Mgbasa ozi
Nke ahụ nwere ike ịdị ka ọtụtụ ọnọdụ ahụike, mana ọ nweghị nke ọ bụla ga-ekwe nkwa.
You ga-achọ iso nleta ndị dọkịta na-aga eleta oge niile, yana enwere ule ndị dọkịta gị ga-agba iji nyochaa nsogbu ndị a.
Ule / Nyocha Vet gị nwere ike ịrụ:
DNA maka Lipofuscinosis
Organizationsfọdụ òtù nwere ike inye aka na ule ndị a yana ịnyekwu ozi.
Mahadum Pennsylvania na-enye PennHIP . Nnwale AIS PennHIP ha bụ nyocha dị oke mma.
Na Ntọala Orthopedic maka anụmanụ (OFA) na-enye ọtụtụ ọrụ. OFA nwere Companion Animal Eye Registry (CAER), ma ị nwere ike ịnweta nyocha ophthalmologist site na ọrụ ha.
Ha na-enye nyocha hip na nyocha nke ịnụrụ iji ule BAER (Brainstem Auditory Evoked Response).
Nlere na nyocha ndị a niile nwere ike iyi ihe siri ike, mana ha dị mma maka nwa bebi gị. Na mgbakwunye, ịnakwere ụfọdụ ọnọdụ siri ike n'oge ga-abara nkịta gị uru na nlekọta.
Onye Territeri Tibet gị nwere afọ ndụ nke afọ 15-16. Site na nlekọta kwesịrị ekwesị, onye gị na ya ga-anọ ogologo oge.
Pricegwọ nwa nkita Tibet nwere ike ịdị iche iche. Ahịa ahịa si $ 500 na $ 2500.
Costgwọ ahụ nwekwara ike ịbụ ihe na-egosi na mkpụrụ ndụ ihe nketa si malite. Ndị na-eme nke ọma ga-akwụ ụgwọ ihe karịrị ụlọ ahịa anụ ụlọ na ụmụ nkịta.
Ọ bụ ezie na ụlọ ahịa anụ ụlọ ma ọ bụ ụlọ nkịta ga-adị ọnụ ala, ha ekwesịghị ịbụ nhọrọ mbụ gị. Ugbo nkita na-elekwasị anya na uru karịa ọdịmma anụ ụlọ.
Animalsmụ anụmanụ na-enwekarị ụlọ na-adịghị mma, ha nwekwara ike ibute nsogbu ahụike. Ugbo nkita agaghị anwale mkpụrụ ndụ ihe nketa.
Chọrọ ezigbo onye na-azụ ihe mgbe ị na-enweta Tibet Terrier. Ha na-anwale nkịta ha maka ọnọdụ ahụike mkpụrụ ndụ ihe nketa, ha ga-enyekwa ụmụ anụmanụ ha ezigbo ọnọdụ obibi.
Ndị a na-emekọ ihe na ụlọ ọrụ ndị na-echebe ụmụ anụmanụ ma na-akwado ụdị ọkwa ahụ.
Onye na-azụlite ntụkwasị obi ga-anọkwa n'ihu ma na-eme ihe n'eziokwu banyere mkpụrụ ndụ ihe nketa na akụkọ ihe mere eme nke ahụike.
Ha ga - enwe onu ahia di elu, mana maka onu ahia ahu, igha achota na ị ga - enweta ezigbo nwa.
Ná nkezi, ndị Tibet Terrier nwere ụmụ nkịta isii na-awụba n'oké osimiri, yabụ dabere na onye na-azụ ya, ọ nwere ike ọ gaghị enwe ọtụtụ ịgagharị.
Reedzụta Nkịta Dị Nsọ
Ọ bụrụ na ị na-achụ nta maka onye na-azụ TT, ụfọdụ ebe nwere ike inye aka na nyocha gị.
Tibet Terrier Club of America nwere ụkpụrụ omume maka ndị na-azụ anụ ịgbaso. TTCA nwekwara ndepụta nke breeder okwu na mmadụ niile na-agbaso ụkpụrụ omume ọma ha.
Nyere na e nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iri abụọ na-azụ ihe na ndepụta ha, ọ nweghị ebe ka mma iji malite nyocha gị.
Ndi American Kennel Club nwekwara akụrụngwa iji nyere gị aka ịchọta ụmụ nkịta maka ọrịre .
AKC na-ewere ihe ha na-eme nke ọma, na nkịta niile edepụtara na saịtị ha sitere na ndị na-eme nke ọma, ọtụtụ na-esite n'aka ndị na-agba ume.
Nnapụta Nke Ọma
Ana m akwado ịkwado mgbe niile n'ihi na e nwere ọtụtụ nkịta chọrọ ụlọ ịhụnanya.
Ozi ọma maka onye ọ bụla na-ele anya ịmata Tibet Terrier bụ na ha bụ ìgwè a hụrụ n'anya. Ọtụtụ otu na-enyere aka ịzọpụta ma chọta ụlọ maka ụmụaka a.
Otu n'ime akụrụngwa gị kachasị mma na mbọ a ga-abụ nnapụta nnabata nke Tibet.
Ha depụtara nkịta dị kpọmkwem na ha ebe obibi , ma ha nwekwara a ndekọ nke nnapụta si gafee United States na mba ụwa.
TTCA nwekwara ike inyere gị aka n'ịzọpụta pup na mkpa. Ha na-enye ihe enyemaka iji nyere gị aka nyocha na ha peeji nke nnapụta , ma ọ ga-adị mkpa ka ị nyefee ajụjụ tupu oge eruo.
Lhasa Apso nkịta dị obere na obere ụkwụ na mkpụmkpụ muzzles.
Lhasa Apso na Tibet Terrier nwere oke myirịta. Ha abụọ bụ nkịta Tibet nwere ụdị mmetụta a. Karịsịa, ha nwere ike ịbụ ezigbo ndị enyi nwere ihu ihere.
Lhasa Apso nwekwara uwe mkpuchi abụọ yiri nke a, nke nwere ike ime ha n'akụkụ doppelgangers nke Tibet Terriers.
Ihe mbu enwere ike ihu bu na Lhasa Apso bu obere nkpuru ma e jiri ya tụnyere nke Tibet Terrier.
Njirimara Lhasa Apsos pere mpe ma nwekwaa mkpụmkpụ ụkwụ na mkpụmkpụ mkpụmkpụ.
Feetkwụ ndị Tibet Terrier na-abụkarị ndị a ma ama na ụkwụ aka ha 'snowshoe', nke bụ àgwà Lhasa Apso na-enweghị.
Ọ bụ ezie na ụdị abụọ ahụ na-eme enyi na-eme ihere ma nwee mmetụta ịhụnanya, ha ga-adị iche na mkpa onye ọ bụla dịka nri na mmega ahụ naanị n'ihi oke.
Kedu ụzọ ọ bụla, ị ga-ahụ nkịta na-eme anụ ụlọ na-enye obi ụtọ.
Ọtụtụ crossbreeds na-atọ ụtọ na-eji Tibet Terrier, dị ka Kobetan na Ttoodle. Ka anyị nyochaa ngwakọta ndị a iji hụ ihe mere ha ji dị iche.
Zute Tanya, na Kobetan. Isi ihe onyonyo
Na Kobetan bụ obe ike dị elu n'etiti Cocker Spaniel na Tibet Terrier. Ha ga-achọ ezigbo mmega ahụ, mana ha nwere ezigbo omume metụtara ezinụlọ.
Ha na ụmụaka na anụ ụlọ ndị ọzọ na-eme ọfụma, mana mmekọrịta mmekọrịta oge na-arụ ọrụ kacha mma.
Kobetan bụ obere nkịta dị nkenke na ọkara n'ogologo n'etiti sentimita 14-16 ma nwee ike ịdị n'etiti 22-25 pound. Akwa ha, akwa mkpuchi ga-achọ nlekọta dị otú ahụ na Tibet Terrier.
Kobetan nwere ikike ịwụpụkwu, ya mere na ọ bụghị hypoallergenic, mana ọ ka nwere ike ịbụ ezigbo anụ ụlọ maka ụfọdụ ndị na-arịa ọrịa nfụkasị ahụ.
Zute Zoey, nke a Ttoodle. Isi ihe onyonyo
Na Ttoodle bụ mmetụta ịhụnanya dị n'etiti Tibet Terrier na, nke kachasị, ọkọlọtọ Poodle. Ha na-akwa mmezi mgbe ọ na-abịa ejiji, ma ha bụ hypoallergenic.
Ha bụ nkịta ezinụlọ nwere ọgụgụ isi nwere ike ịbụ ndị ihere na ndị bịara abịa. Mmekọrịta oge mbụ ga-enyere ndị bịara abịa aka na nsogbu nwere ike ịchịkọta anụmanụ ndị ọzọ.
Ttoodle bụ usoro dị nha nke dị n'etiti 14-19 sentimita asatọ ma tụọ n'etiti 32-45 pound.
Ha nwere ike ịdị mfe iji nwayọọ zụọ, mana ha na-enwekarị ikewapụ nkewa ma ọ bụrụ naanị ha nọrọ ogologo oge.
Ọfọn, ọ bụrụ na ị na-achọ nkịta hypoallergenic nwere oke ike dị mma, ha kpuchiela gị.
Ha bụ ezigbo ndị enyi na nkịta ezinụlọ ndị ga-eso anụ ụlọ ndị ọzọ na-emekọ ihe mgbe ha na-eme dị ka ndị nche kachasị mma.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịrara oge achọrọ maka ejiji na mmega ahụ ha, nke a nwere ike ọ gaghị abụ nwa bebi maka gị.
Omume isi ike ha na nke ihere nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka ụfọdụ ndị, yabụ gbaa mbọ hụ na ndụ gị na-egbo mkpa ha.
The Tibet Terrier nwere ike ọ gaghị abụ nri zụrụ gị, ma ọ bụrụ na ị ka nwere mmasị yiri nkịta, anyị emeela ka ị kpuchie. Enwere ike ịlele ụdị anụmanụ ndị a iji hụ ma ha dị mma maka gị.
Bdị ụdị dị iche iche:
Onye Spaniel Tibet
Ihe niile I Kwesịrị Tomara Banyere White Pomeranian
onye Ọstrelia onye ọzụzụ atụrụ na -acha odo odo ụlọ
kedu ụdị ụkwụ nkịta nwere
otu esi elekọta morkie
German onye ọzụzụ atụrụ aha na nkọwa ya